Tenders List | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Open Tender No 84 to 92
Published: Dec 18
Thu, 2019-01-17 14:30
Tender No. 84 to 92.docx
Department Under :
Open Tender No 78 to 83
Tue, 2019-01-15 14:30
Tender No. 78 to 83.docx
Open Tender No 12(T)7 and 8
Tue, 2019-01-22 14:30
12(T)7 and 8.docx
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အမှတ်စဉ်( ITCSD-၉/၂၀၁၈)
Published: Dec 17
Tue, 2019-01-08 16:00
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း အမှတ်စဉ်( ITCSD-၈/၂၀၁၈)
Mon, 2018-12-17 16:30
Open Tender No.68 To 76
Published: Dec 12
Tue, 2019-01-08 14:30
Open Tender No 68-76.pdf
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Published: Nov 19
Fri, 2018-12-07 16:00
(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂)၊ နေပြည်တော်မှ ပူးတွဲဖော်ပြပါ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ တင်ဒါပေးသွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ယာဉ်ဝင်ခ ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း
Published: Nov 15
Tue, 2018-12-18 13:00
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ဒေသ (၁၂) ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး၏ အရာရှိအိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Thu, 2018-12-06 14:00
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒေသ (၁၂) ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ တောင်ကြီးမြို့၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရုံးချုပ်၏ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် အရာရှိအိမ်ရာ (၃၆ ပေX၂၆ ပေ ၊ RC (၂) ထပ်) နှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ( ၁၀၀ ပေ X၂၈ ပေ ၊ RC (၂) ထပ်) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။